यस्तो पनि जागिर खाने हो ! – Apan Dainik
प्रदेश नं. ४ गण्डकीविचार/अन्तर्वार्ताशिक्षा /स्वास्थ्यसमाचार
अपन दैनिक न्युज डेस्क Follow on Twitter २०७८ श्रावण ३० गते शनिबार २२:०२
शिक्षक : कमला अधिकारी
मेरो हात च्याप्प समाउँदै भन्न थाली, ‘तँ त टिचर होस् नि! बिचरा, घरखर्च पनि कसरी चलाउँछेस् ? तीन महिनाको तलब लाख पनि नभेट्ने। हामी बरू महिनामै लाख कमाउने भयौं। तँ कलेज टपर भएर यस्तो जागिरमा झुण्डिएर बस्नुपर्‍या छ। जाबो तीस हजारको जागिर पनि के जागिर? मैले भनेको मान्छेस् भने छाडिदे यस्तो जागिर।’
‘एकछिनका लागि भेटेर कुरा गर्नु छ।’
उसले फोनमै भन्न थाली, ‘ह्या कस्तो लाटी हो यो त? हाम्रो पालामा त सरहरू कक्षामै आउँदैनथे। अफिसमा काँक्रा काटेर खाएर बस्थे। चलेकै थियो। तँ पनि त्यही स्कुलको सरकारी शिक्षक नै त होस्। निकै ड्युटिफुल बन्दी रैछ।’
आफ्नो ब्यागबाट एउटा घडी निकालेर भन्न थाली, ‘ला तँलाई उपहार ल्याइदिएकी छु। पच्चीस हजारको घडी।’
आफ्नो देब्रे हातको घडी देखाउँदै ऊ कड्किन थाली, ‘यो त मेरो बुढाले युएसएबाट ल्याइदिनुभएको। पचहत्तर हजारको घडी। हेर्न कस्तो राम्रो छ।’
एकछिनपछि सोध्न थाली, ‘घडेरी कहाँ किनिस्? घर पो बनाइसकिस् कि?’
मैले टाउको हल्लाउँदै भनेँ, ‘नाइँ बनाको छैन।’
‘विचरा मास्टरको जागिर के खाने, के लाउने?’ मन फुकाएर हाम्रो जस्तो लवाइखवाइ गर्ने हो भने त ऋण नै लाग्छ होला है तिमीहरूलाई त?’
‘छाड्दे यी भावनाका कुरा। तैले दुःख पाउने भइस् मास्टरको जागिर खाएर। यो जागिरले के नै सुख हुन्छ र? दुनियाँको टोकसो सहन पर्छ। मेरो कम्पनीको सेयरहोल्डर बनिस् भने तँलाई मालामाल बनाइदिन्छु केटी। तँ जस्तै साथीको जरुरत छ मलाई।’
उसले पक्कै ठानेकी थिई, म घमण्डी भएर ‘बिग्रेकी’ हुँ।
ऊ मेरो कानमा साउती गर्न थाल्यो, ‘यस्तो जागिर नि के खान मन लागेको तिमीलाई? अलि जाँगर गरे त लोकसेवामा नाम निकाली हाल्थ्यौ नि!’
‘सबै तिमीजस्तै जागिरे भए भने तिम्रा-हाम्रा छोराछोरीलाई पढाउने कसले त?’ म मन नलागी-नलागी खिस्स हाँसे।
यही निहुँमा पसले दाइले प्याच्च बोले, ‘मास्टरहरू निकै लोभी हुन्छन्। बार्गेनिङ गरेर हैरान। त्यसमाथि पनि डेट हेर्ने। निकै पढेलेखेको बन्छन्।’
म पनि के कम! त्यही मेसोमा भन्दिएँ, ‘यस्ता एक्स्पायर चिज बेच्दा तपाईंको पसलको विश्वसनीयता पनि एक्स्पायर होला। पछिसम्मलाई साँच्चिकै व्यापारी बन्ने हो भने ग्राहकलाई खुसी राख्न सक्नुपर्छँ। पहिलो गासमै ढुंगा लागेपछि कुन ग्राहक तपाईंकोमा फर्केर आउँछ।’
‘होइन म्याडम, यो डेट हेर्ने कसरी हो? सिकाउनुस् त सामान फिर्ता गर्नुपर्‍यो,’ बल्ल ऊ ठाउँमा आए।
शिक्षकलाई जे भने नि हुने, जे गरे नि हुने बनाइएको छ। आफूमाथिको यो अपमान बन्द गर्न असल र ‘बोल्ड’ शिक्षक बनेर सेवा गरौं। प्रशासनले शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्‍यो भने मात्रै पनि आधा बोझ चुट्कीमै गायब हुन्छ। विद्यार्थीमैत्री सँगसँगै हरेक स्कुल शिक्षकमैत्री पनि हुन जरुरी छ ताकि आफ्नो पेसाप्रति कुनै शिक्षकलाई आत्मग्लानी नहोस्।
कमला अधिकारी जागिर शिक्षक
अपार्टमेन्टमा जुवा खेलिरहेका १६ जना पक्राउ
२०७८ मंसिर २२ गते बुधबार १३:०२
२०७८ कार्तिक २४ गते बुधबार २०:३९
२०७८ कार्तिक २६ गते शुक्रबार १४:०८
तयारी विना रेल आयो (सम्पादकीय)
२०७७ पुष १५ गते बुधबार ०४:३४